ဟိန်းလတ် - ဝီကီပီးဒီးယား
(၁၉၄၈-၁၁-၂၁) နိုဝင်ဘာ ၂၁၊ ၁၉၄၈ (အသက် ၇၂)
ရန်ကုန် ဝိဇ္ဇာနှင့် သိပ္ပံ တက္ကသိုလ်
အမျိုးသား စာပေဆု (၂၀၀၂)
ဟိန်းလတ် (၂၁ နိုဝင်ဘာ ၁၉၄၈ မွေးဖွား) သည် မြန်မာ အမျိုးသား စာရေးဆရာတစ်ဦး ဖြစ်သည်။
၃ စာပေရေးရာ ဆောင်ရွက်မှု
၅ ရေးသားခဲ့သည့် စာအုပ်များ
၅.၁ စုစည်း တည်းဖြတ်သော စာအုပ်များ
၅.၂ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးသားပြုစုသော စာအုပ်
ဦးဟိန်းလတ်သည် ရန်ကုန် ဝိဇ္ဇာနှင့် သိပ္ပံ တက္ကသိုလ်မှ ဝိဇ္ဇာနှင့် စာကြည့်တိုက် ဒီပလိုမာ ဘွဲ့များ ရရှိ ခဲ့သည်။
ဦးဟိန်းလတ်သည် ၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင် ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၊ စင်ကာပူနိုင်ငံနှင့် ၁၉၉ဝ ပြည့်နှစ်တွင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသို့ ပညာရေးနှင့် စာပေစာနယ်ဇင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအတွက် သွားရောက်ခဲ့သည်။ ၁၉၉ဝ ပြည့်နှစ်မှ ၁၉၉၃ ခုနှစ်ထိ မြန်မာနိုင်ငံစာပေနှင့် စာနယ်ဇင်းအဖွဲ့ (ဗဟို) အတွင်းရေးမှူး (၁)၊ အလုပ်အမှုဆောင်နှင့် တွဲဖက် အတွင်းရေးမှူးတာဝန်များ ဆောင်ရွက် ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံစာပေနှင့်စာနယ်ဇင်းအဖွဲ့ ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်၊ မြန်မာနိုင်ငံ စာကြည့်တိုက်ဖောင်ဒင်းရှင်း ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်၊ ပြေတီဦးဖောင်ဒေးရှင်း ပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်း ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်တာဝန်များ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
၁၉၆၅ ခုနှစ်မှစ၍ ဝတ္ထု၊ ကဗျာ၊ ဆောင်းပါးများ ရေးသားခဲ့ရာ ယခုအထိ ရေးသားပြီး စာပေ ဆောင်ပါးပေါင်း ၃ဝဝဝ ကျော်နှင့် လုံးချင်း စာအုပ် ၉၃ အုပ် ရှိပြီဖြစ်သည်။ တတိယ ကမ္ဘာမှ ပထမကမ္ဘာသို့ စာအုပ်၂၀၀၂ ခုနှစ် အမျိုးသား စာပေဆုရရှိခဲ့သည်။ စံပယ်ဖြူ မဂ္ဂဇင်း၊ စန္ဒာ မဂ္ဂဇင်းနှင့် မိုးဂျာနယ်တို့တွင် အယ်ဒီတာအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
၁၉၉၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၉ ခုနှစ်ထိ ပေါ်ပြူလာ ဂျာနယ်အယ်ဒီတာချုပ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှစ၍ Asean Fame Media Group ဒုဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည်။ ပေါ်ပြူလာနယူး ဂျာနယ်၊ ရတီမဂ္ဂဇင်းတို့ကိုဦးစီးဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ အစ္စရေးနိုင်ငံ၊ ထိုင်းနိုင်ငံတို့တွင် စာနယ်ဇင်းသင်တန်းများ ဆည်းပူးခဲ့သည်။ စင်္ကာပူ၊ မလေးရှား၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ ဟောင်ကောင်နိုင်ငံများသို့ လေ့လာရေးခရီးသွားရောက်ခဲ့သည်။
ပိတောက်မြေမဂ္ဂဇင်းသို့ ပေးပို့ခဲ့သော ပုံတူမျိုးပွားခြင်းဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်မှာ သူတစ်ပါးရေးထားသည့် ဆောင်းပါးကို နာမည်ဖျက်သွင်း၍ ခိုးယူပေးပို့ကြောင်း ပေါ်ပေါက်ပြီးနောက်၊ ပူပူနွေးနွေး အမျိုးသား စာပေဆုရထားသည့် လီကွမ်းယုအတ္ထုပ္ပတ္တိသည်လည်း အစအဆုံး ကိုယ်တိုင်ဘာသာပြန်ခြင်းမဟုတ် စသော နောက်ဆက်တွဲ အငြင်းပွားမှုများပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအီးလ် ကင်မ်ဂျုံအီ သို့မဟုတ် မြောက်ကိုရီးယား၏ ချစ်လှစွာသောခေါင်းဆောင်ကြီး အတ္ထုပ္ပတ္တိ စာအုပ်ကို ဘာသာပြန်ဆို ရေးသားထုတ်ဝေပြီး မကြာခင် မြောက်ကိုရီးယား သံရုံးမှ ကျန်ရှိစာအုပ်များ ပြန်လည်သိမ်းဆည်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ကမ္ဘာကျော် စာရေးဆရာနှင့် သူတို့စာများ (၁၉၉၇)
ကမ္ဘာကျော် မေတ္တာစာများ (၂၀၀၁)
ကမ္ဘာ့ အထင်ရှားဆုံး ဘေးအန္တရာယ်ဆိုးများ (၁၉၉၃)
ချမ်းသာဖို့ အမြဲချမ်းသာဖို့ (၁၉၉၇)
ချမ်းသာရေး ပညာ (၁၉၉၇)
ဂမ္ဘီရ အစီအရင် တားရော့ဗေဒင် (၁၉၉၈)
ငဖဲ နိုင်ငံရေး အတ္ထုပ္ပတ္တိ (၁၉၇၇)
စာတော အလယ်မှာ (၂၀၀၁)
စာပေ အင်တာဗျူး (၁) (၁၉၉၉)
စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှု ရှာပုံတော် (၁၉၉၅)
စိတ်နှင့် ဂမ္ဘီရ (၂၀၀၁)
စိတ်အကြံပေါက်အောင် လုပ်နည်း (၂၀၀၁)
ဆူဘတ်ချန္ဒရာဘို့(စ်) နိုင်ငံရေး အတ္ထုပ္ပတ္တိ (၁၉၇၉)
ဇာဇင်စကီး နိုင်ငံရေး အတ္ထုပ္ပတ္တိ (၁၉၇၉)
တဂိုး၏ ဒေသနာ အနုအလှများ(၁၉၇၈)
တားရော့ ဂမ္ဘီရဝေဒ (၁၉၉၉)
တပြည်သူ တပြည်သား (ဝတ္ထု) (၁၉၈၂)
ထင်ရှား ကျော်ကြား စီးပွားရေး သမားများ (၁၉၉၈)
နှစ်ဆယ်ရာစု အနောက်တိုင်း စာပေ (၁၉၇၂)
ပုံပြင် အင်္ဂလိပ် စကားပြော
ပုံပြ အင်္ဂလိပ် အဘိဓာန်
ဖြည်းဖြည်းလာပါ အိုဇရာ (၂၀၀၀)
ဘဝတန်ဖိုး ဖန်တီးခြင်း (၂၀၀၀)
မော်ဒန် အမေရိကန် - အင်္ဂလိပ် စကားပြော -
မြို့တော်သုံး စီးပွားရေး အင်္ဂလိပ်စာ
လောကီရေးရာ သုခချမ်းသာ အတတ်ပညာ (၁၉၉၆)
လှုပ်လှုပ်ရှားရှား (၁၉၉၃) ဖြစ်ရပ်များ (၁၉၉၄)
သိစိတ်စီးကြောင်းနှင့် စာပေဝါဒများ (၁၉၉၈)
အကောင်းဆုံး လက်ရွေးစင် အင်္ဂလိပ် စာစီစာကုံးများ -
အဖြူကို ချစ်သော အမည်း အမည်းကို ချစ်သော အဖြူ (ဝတ္ထု) (၁၉၇၈)
အမေရိကန်သုံး အင်္ဂလိပ် စကားပြော
အင်္ဂလိပ် စကားပြော (Talk English)
အင်္ဂလိပ် စကားပြောနှင့် ဟိန်းလတ်၏ ရှင်းလင်းချက်များ
အင်္ဂလိပ် စကားပြော အဘိဓာန်
အင်္ဂလိပ် စကားပြော အီဒီယမ်
အင်္ဂလိပ်လို ဘယ်လိုပြောမယ် ဘာပြောမယ် (How to say + What to say)
အင်္ဂလိပ်လို ဘယ်လိုရေးမယ် (How to write English)
အင်္ဂလိပ် ဝါကျဖွဲ့ပုံ နည်းမျိုးစုံ
အင်္ဂလိပ် သဒ္ဒါ ပေါင်းချုပ်
အင်္ဂလိပ် သဒ္ဒါ သင်ခန်းစာများ
အင်္ဂလိပ် အတွေး အင်္ဂလိပ် အရေး
အိတ်ဆောင် အင်္ဂလိပ် စကားပြော
တတိယ ကမ္ဘာမှ ပထမကမ္ဘာသို့
သမ္မတအာမာဒီနီဂျတ်နှင့်နျူးကလီးယားအီရန် (မတ် ၂၀၁၀)
ကင်မ်ဂျုံအီ (သို့မဟုတ်) မြောက်ကိုရီးယား၏ ချစ်လှစွာသောခေါင်းဆောင်ကြီး (မေ ၂၀၁၀)
ကမ္ဘာလှည့်မွှေ စီအိုင်အေ (စီအိုင်အေဇာတ်သိမ်းခန်း) (မတ် ၂၀၁၁)
အိုဘာမား၏စစ်ပွဲများ (ဩဂုတ် ၂၀၁၁)
အစ္စရေးကို ကယ်တင်ခြင်း (စက်တင်ဘာ ၂၀၁၁)
မြေပုံမဲ့လမ်း (တောင်ကိုးရီးယားသမ္မတအီမြောင်ဘတ်၏ကိုယ်တိုင်ရေးအတ္ထုပတ္တိ) (ဇူလိုင် ၂၀၁၂)
မလွယ်သောနေ့ (အိုစမာဘင်လာဒင်ကို လုပ်ကြံသော နေဗီဆီလ်းဇာတ်လမ်း) (အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂)
စုစည်း တည်းဖြတ်သော စာအုပ်များ[ပြင်ဆင်ရန်]
ဆေးရောင်စုံ ဒဂုန်တာရာ ဆောင်းပါးများ
ဗီတာမင် (၁၃) ဝတ္ထုတိုများ
အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးသားပြုစုသော စာအုပ်[ပြင်ဆင်ရန်]
↑ ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ ဆက်ဆံရေး ဦးစီး ဌာန (ရုံးချုပ်) စာတည်း အဖွဲ့, ed. (ဧပြီ ၂ဝဝ၃)။ နှစ်ဆယ် ရာစု မြန်မာ စာရေး ဆရာ များနှင့် စာစု စာရင်း (ပထမ အကြိမ် ed.)။ ပညာရွှေတောင် စာအုပ်တိုက်။ |date= ရှိ ရက်စွဲတန်ဖိုး စစ်ဆေးရန် (အကူအညီ)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဟိန်းလတ်&oldid=572452" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၆:၂၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။